Idizayini ye-Pcb, ubuchwepheshe be-Pcb, iBhodi lesifunda - iPandawill
Kwenze kahle esigabeni sokuklama
IPandawill inikeza ukwesekwa kokuklanywa kwe-PCB hhayi nje njengokuchaza lokho esikudingayo, kepha futhi nalokho esikwenzayo ngomklamo wakho kusuka ekutholeni idatha kuye kumkhiqizo ophelile. Idizayini ye-PCB ifaka phakathi: Ijubane Eliphezulu, i-Analog, i-Digital-analog Hybrid, Ubuningi obuphezulu / i-Voltage / Amandla, i-RF, i-Backplane, i-ATE, iBhodi Elithambile, iBhodi le-Flex Hard, i-Aluminium Board njll.
I-Multilayer, i-HDI, ukujika okusheshayo
AmaPandawill Circuits akhiqiza futhi ahlinzeka ngobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme bebhodi lesifunda eliphrintiwe, amavolumu, izindleko nokukhiqiza izinketho zesikhathi sokuhola ngokususelwa ekuqondeni kwethu okuyisisekelo kwenqubo ye-PCB nenhlangano kanye nemfuneko yakho.
Ikhwalithi yokunikezela, ukuguquguquka kokulethwa, izindleko eziphethwe
Ngethimba lokuthenga elinolwazi nobungcweti, sinobuchwepheshe bokukhomba izinketho zokuthola ulwazi ngokuya ngezidingo ezithile zomkhiqizo ngamunye namakhasimende futhi sinikeze izingxenye ezenzelwe ukuthengwa, ukulethwa kokuguquguquka, ukunciphisa izindleko ngisho nokuphathwa kwesitoko.
Kusukela ekukhutsheni ukukhiqiza ngobuningi
Ngamandla womhlangano womgodi (i-THT) nobuso be-surface mount (SMT), womabili aholile ne-RoHS atholakalayo, ibanga lethu lesevisi ye-PCBA lisuka kumfanekiso othile liya ekwakhiweni okuqhubekayo kwemihlangano eyinkimbinkimbi, yobuchwepheshe obuningi be-PCB kumavolumu aphansi kuye kwaphakathi.
IBHUKU LOKWAKHA NOMHLANGANO WEMISEBENZI
Ukusekela kusuka ku-A kuye ku-Z
Ngaphezu kwensizakalo yomhlangano we-PCB, sinikezela ngomhlangano wokuhlanganiswa kwamabhokisi wamasistimu amancane namamojula kanye nokuhlanganiswa okugcwele komkhiqizo. Ngokusebenzisa inethiwekhi yethu yabahlinzeki obathandayo, siyakweseka kusuka ku-A kuye ku-Z, kusukela kwikhotheshini kuya esigabeni sokukhiqizwa ngobuningi kwephrojekthi yakho.